Nhau - Iyo Musika Tarisiro yeWelded Pipe Midziyo Yakanyanya Kupamhama
Welded pombi michina indasitiri inogara kwenguva refu, uye nyika nevanhu vanoda indasitiri yakadaro! Mukuita kwekusimudzira kwenyika, kudiwa kwesimbi kuri kuwedzera, saka chikamu chepombi yesimbi mukugadzirwa kwesimbi iri kukura nekukura. Pipe kugadzirwa kunogona kazhinji kukamurwa muzvikamu zviviri, imwe isina musono pombi, inonyanya kugadzirwa nekuumburuka, extrusion uye kudhirowa.
Ndeipi chaiyo inongedzo yeiyo mhando yeakaomeswa pombi muchina, welded pombi unit bhizinesi vanhu vakurudzira: iyo organic musanganiswa wehunhu, basa uye kusimudzira kugona kwevatatu kuita iyo chaiyo chirevo chezita rezita reiyo welded pombi unit. Hunhu, ndiwo mucherechedzo wekuzvarwa kwezita rezita remuchina wepombi yemuchina. Iyo yepamusoro mhando yezvinhu zvakasungwa pombi zvigadzirwa, mutengo unonzwisisika uye basa rekufungisisa ndizvo zvinotarisirwa kuhwina kuzivikanwa kwevatengi uye nzanga.
Hunhu hwesimbi yakasungwa pombi unit ndiyo hwaro uye hupenyu hwehutongi hwechiratidzo. Sezvo hupfumi hwenyika hunopinda munguva yeshanduko inokurumidza, anoona akakwenenzverwa mapaipi emakambani anozvipira kusimudzira zvigadzirwa zvakajairwa kune zvigadzirwa zvema branded welded pipe unit zvigadzirwa.
Iyo welded pombi muchina inoita kuti zvikwanise kushandisa hombe dhata zviwanikwa, nekudaro zvichikurudzira nesainzi shanduko mukushambadzira, izvo zvinoita kuti iyo yese kushambadzira maitiro eiyo welded pombi unit yakanyatsojeka.
Welded pombi mayuniti anoyera kushambadzira maitiro nekuisa zvese pane yesainzi data ongororo kusarudza zvakanaka vatengi vevanhu, pane kupofumadza uye zvisina musoro kuisa mari zviwanikwa uye kurasikirwa nevatengi uye varipo vatengi.
Kuongororwa kwekuchengetedza kweiyo chigayo ichiita kunosiyana zvichienderana nekuwanda kwekushandisa, mamiriro ezvakatipoteredza, nezvimwe (ona Tafura 1). Tafura 1 inoratidza maitiro ekuongorora ekuchengetedza. Iko kutarisa kwekuchengetedza kwakanyanya kutarisa muchina nguva nenguva uye uine zvakakwana zvekushandisa uye zvekukurumidzira zvekushandisa kuona zvakajairika mashandiro uye kugadzirwa.